Tsvaga iyo rustic chic maitiro eimba yako | Bezzia
Susana Garcia | 07/06/2021 20:00 | Decoration, Kushongedza maitiro
El rustic chic chimiro chinonyanya kukoshesa mazuva ano, iri musanganiswa unoshamisa wezvimedu uye zvemazuva ano zvidimbu, vintage uye yazvino. Misiyano idanho rakakura rekushongedza, nekuti nenzira iyi hatinamatire chete kune imwechete sitayera uye tinogadzira zvakasarudzika uye zvakakosha zvinhu. Zvinogara zvirinani kusanganisa masitayera uye uwane imba ine hunhu pane kopi yechimwe chimiro chinogona kuneta.
El rustic chic chimiro chitauro cheinovhecha icho chinotsvaga kuchipa chakanyanya kunaka kubata uye yakaomeswa kune rustic nharaunda. Rudzi rwezvakatipoteredza rwakafemerwa nenyika, nzvimbo dzerustic, uko kune zvakasarudzika-zvinotaridzika zvinhu uye zvidimbu zvinoshanda, asi iyo yekubata kwechic inobatsira iyo kuvandudza uye kuzadzisa iyo hukomba iyo dzimwe nguva inoshaikwa.
1 Natural zvigadzirwa
2 Chiedza uye zvakasikwa mimvuri
3 Wedzera maruva nemiti
4 French fesheni fenicha
5 Marble uye zvedongo
ari zvakasikwa zvigadzirwa chikamu chakakosha cheiyo rustic maitiro, saka hatigone kuita tisipo. Huni dziri mufenicha, rattan, iwo matengu enicker uye kunyangwe zvidimbu zvematombo zvakakwana kugadzira iyo rustic mhepo iyo iwe yaunogona gare gare kuwedzera iyo chic kubata. Iyo rustic inofanirwa kuve protagonist, sezvo iriyo musimboti maitiro. Fenicha yematanda inowanzo kuve yechinyakare kana ine rustic, yakasimba kutarisa isina zvishongo zvakawandisa. Mapuriro ematanda kana ematombo anowanzo shandiswa. Kune rimwe divi, zvishongedzo zvakawanda zvinoshandisa wicker, nemabhasikiti kana rugs mune ino yakanaka zvinhu irustic zvakadaro.
Chiedza uye zvakasikwa mimvuri
Mune ichi chimiro, a bata zvakanyanya zvemazuva ano munzvimbo dze rustic. Iwo matoni emwenje anotibatsira kudzikisira iyo rustic kubata, nekuti nharaunda dzepamberi dzaive neakawanda matema matanda uye matoni akasimba akadzima makamuri. Mune ino kesi isu tinotsvaga ma shades akaita seachena, grey uye kunyanya beige ari akareruka, akapfava uye anopawo kudziya. Mune mhando iyi yemamiriro ekunze hazviite zvine musoro kutarisa zvidimbu zvemavara mazhinji, nekuti munzvimbo ye rustic kazhinji hapana.
Wedzera maruva nemiti
Lo rustic ine zvakawanda zvekuita nekumaruwa uye zvakasikwa, saka zvimwe zvirimwa hazvigone kupotsa munzvimbo idzi. Mazuva ano, zvirimwa zvinotorwa zvakanyanya mukati, zvidiki zvidiki uye zvidiki, kugadzira makona akakosha. Pfungwa iyi ndeyekuwedzera kumwe kutsva uye ruvara nezvirimwa. Tarisa mapoto akanaka mumatoni akareruka kana kuwedzera mahwendefa.
French fesheni fenicha
Kunyangwe isu tataura nezve iwo mapoinzi anotitungamira kune iyo rustic maitiro, isu tinofanirwa zvakare kufunga nezvekuwedzera yakanyanya chic kubata. Unogona izvi zvinosanganisira imwe fenicha muchimiro cheFrance. Iyi ficha inoratidzira fenicha iyo yakaumbwa ine zvakawanda zvakawanda, sinous uye nemakumbo akavezwa. Kuwedzera imwechete kana maviri fenicha yeiyi fashoni kunopfuura kukwana kuti kugadzire chic kubata. Uye zvakare, iyo vintage dhizaini chikamu chezvimedu zveFrance uye nekudaro tichave tichigadzira yakasarudzika mamiriro.
Marble uye zvedongo
Zvinhu zveRustic zvinowanzo kuve zvakaomarara uye zvisina kushongedzwa. Asi kuti tigadzire nzvimbo inoyevedza zvikuru tinogona kuwedzera mamwe marudzi ezvigadzirwa. Iyo machena anoyevedza uye ndosaka ichishandiswa munzvimbo idzi. Inogona kunge iri chimedu chezvemoto, pakatarisana nemarble kana kunyange kubata pamusoro peimwe fenicha. Marble inoyevedza, kunyanya kana isu tikasarudza mavara senge grey uye chena. Kune rimwe divi, zvedongo zvakare ine iyo yakanakisa kubata, saka tinogona kuiisa mune zvidiki zvidiki senge mavhasi kana ekushongedza manhamba. Mune iwo madiki madiki iwe unogona kuona yakaomesesa kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Maitiro ekushongedza mune yeiyo rustic chic maitiro